Ndingawajonga njani amaBali oNxibelelwano lwam lwe-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndiwabona njani amabali endinxibelelana nawo kwi-Instagram?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 276
Omnye wemisebenzi enomtsalane kwi-Instagram yile ukupapashwa kwamabali, Lo msebenzi uvumela abo bawupapashayo, baxelele nantoni na ebonakala ngathi kufanelekile kubo, ukuba bathengisa imveliso okanye inkonzo, ivumela ukuba baxelele abathengi babo malunga neendaba.
Kwimeko yabasebenzisi beeakhawunti ezingezizo ezentengiso, iyabavumela ukuba baxelele abalandeli babo ezona zinto zibalaseleyo zemihla yakho. Kwakhona, kubafowunelwa ababona amabali, ngamava amnandi kakhulu, kuba bayazi kancinci malunga nabantu ababalandelayo kwaye ibabonelela ngomfanekiso onzulu wokuba bangobani, kuba kwibali ngalinye abantu batyhila okuninzi ngokwabo.
Ungawajonga njani amabali:
Ngaba kunjalo unokukhetha ezimbini ukubona amabali, kuxhomekeke ekubeni uyayifuna okanye awuyifuni loo mntu ujonge kuye ibali ukuba uyazi ukuba uyayibukela okanye hayi. Kwimeko apho kungabandakanyi ingxaki enkulu ebantwini ukuba bazi ukuba ungabona amabali abo ngokhetho olunye. Ukuba ungomnye wabo bakhetha ukungaziwa, sicebisa ukhetho lwesibini:
Eyokuqala yile ngenisa iakhawunti yakho ye-Instagram ngendlela eqhelekileyo, ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Nje ukuba ungene ngaphakathi kwiprofayile yakho, Khangela kwaye ukhethe ibali ofuna ukulibona.
Cinezela kwibali olikhethileyo kwaye liza kuvula kwikhompyuter yakho kwaye uya kuzala kwakhona, ngaphandle kwengxaki.
Abantu obabona amabalii-endran ukuya kwiiyure ezingama-24 Ukwazi ukuba ulifakile ibali lakho ulibonile, emva koko inkqubo iyakucima olu lwazi.
Ikhetho lesibini. Sebenzisa imowudi yenqwelomoya:
Eyokuqala kukungena kwiakhawunti yakho ye-Instagram ngendlela eqhelekileyo.
Ulayisha ibali ufuna kwaye ubone kwaye emva koko wenze kusebenze imo yenqwelomoya yefowuni yakho ephathekayo. Imfihlo yoku kukuba ushiye isicelo ngaphambi kokucima imo yenqwelo moya.
Le ndlela yokubonakalayo iya kukuvumela bona amabali owafunayo, kodwa nganye nganye, oko kukuthi, ulayisha ibali ofuna ukulibona, uye kwimowudi yenqwelomoya kwaye uphinde inkqubo, ngebali ngalinye ofuna ukulibona kwi-incognito.
Nangona iyindlela ende kwaye iyacaphukisa, isebenza ngokupheleleyo, kuba akukho namnye kubantu obabonileyo ibali lakhe Ndiyakwazi awuzange ubabone.
Ikhetho lesibini. Ukuvimba:
Into yokuqala ukufaka iakhawunti yakho Instagram ngendlela eqhelekileyo, ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Cofa kwibali ngokuthanda kwakho kwaye iya kuvula kwikhompyuter yakho kwaye idlale, ngaphandle kwengxaki.
Nje ukuba ubone ibali onomdla kulo, Kuya kufuneka uvimbe umsebenzisi Ngubani obone ibali. Ngale ndlela akazukufumana naluphi na uhlobo lwesaziso esimalunga nawe okanye iakhawunti yakho kuba usivimbile, akufuneki ubasuse phambi kwexesha leeyure ezingama-24.
1 Ungawajonga njani amabali:
2 Ikhetho lesibini. Sebenzisa imowudi yenqwelomoya:
3 Ikhetho lesibini. Ukuvimba:
Uyihlela njani imiyalezo esele ithunyelwe kwiTelegram?